ညညဆိုရင် တော်တော်နဲ့ အိပ်မပျော်တဲ့ သူတွေ ၂ မိနစ်အတွင်း အိပ်ပျော်အောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ …
[Zawgyi] ညညဆိုရင် တော်တော်နဲ့ အိပ်မပျော်တဲ့ သူတွေ ၂ မိနစ်အတွင်း အိပ်ပျော်အောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ … ညဖက်တွေမှာ အိပ်မပျော်တဲ့ပြဿနာဟာ ယနေ့ခေတ်မှာ လူအများကြုံတွေ့နေရတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပြီး အကြောင်းအရင်းကတော့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေ၊အစားအသောက်ညီမျှမှုမရှိတာတွေ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အခက်အခဲတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ကောင်းမွန်တဲ့ တစ်နေ့တာကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့အတွက် ညဖက်မှာ သေချာအိပ်စက်ဖို့လိုအပ်တာကြောင့် စက္ကန့် ၁၂၀ အတွင်းမှာပဲ အိပ်ပျော်သွားစေနိုင်မယ့် နည်းလမ်းကောင်းလေးကို ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။ နည်းလမ်း ၁ လျှာ၊ မေးရိုးနှင့် မျက်လုံးတစ်ဝိုက်ရှိ ကြွက်သားတွေအပါဝင် မျက်နှာရှိကြွက်သားတွေအားလုံးကို အကြောလျှော့ထားပါ။ နည်းလမ်း ၂ ပုခုံးတွေကို တတ်နိုင်သမျှ နိမ့်သထက်နိမ့်အောင် နှိမ့်ပေးပြီး လက်နှစ်ဖက်ကို ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်စီမှာ ထားထားပါ။ နည်းလမ်း ၃ အသက်ရှူထုတ်လိုက်ပြီး …
မိမိရဲ့ မျက်နှာအချိုးအစားအလိုက် လိုက်ဖက်တဲ့ ရှေ့ဆံပင်ပုံစံ ရွေးချယ်နည်း
[Zawgyi] မိမိရဲ့ မျက်နှာအချိုးအစားအလိုက် လိုက်ဖက်တဲ့ ရှေ့ဆံပင်ပုံစံ ရွေးချယ်နည်း ဆံပင်ဟာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဒုတိယမျက်နှာလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ ဘယ်ေ လာက်ပဲ လှပတဲ့ မျက်နှာကို ပိုင်ဆိုင်ထားပါစေ၊ မိတ်ကပ်ကို လှအောင် လိမ်း ထားပါစေ လိုက်ဖက်တဲ့ ဆံပင်ပုံစံက ကိုယ်နဲ့မလိုက်ရင် ဘယ်လိုမှ လှပနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။လူတစ်ယောက်ချင်းစီမှာ သူတို့နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ ဆံပင်ပုံစံဆိုတာ ရှိပါတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ရဲ့ မျက်နှာကျပေါ် မူတည်ပြီး လိုက်ဖက်တဲ့ ဆံပင် ပုံစံချင်းတူနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီတစ်ခါမှာ ပြောပြပေးချင်တာကတော့ လိုက်ဖက်တဲ့ ရှေ့ဆံပင်ပုံစံရွေးနည်းပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ မျက်နှာက ဘယ်လို ပုံစံမျိုး လဲ.? ဘေးခွဲ၊ခလယ်ခွဲ (ဒါမှမဟုတ်)ရှေ့ချထားတဲ့ ဆံပင်ပုံ ဘယ်လို မျိုးနဲ့ လိုက်လဲဆိုတာကို …
ရာသီပြန်စတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ အသင်းဖော်တွေကို သတိပေးလိုက်တဲ့ ဖာနန်ဒက်စ်
[Zawgyi] ရာသီပြန်စတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ အသင်းဖော်တွေကို သတိပေးလိုက်တဲ့ ဖာနန်ဒက်စ် ဖာနန်ဒက်စ်ဟာ ယူနိုက်တက်ကို ရောက်လာကတည်းက ခြေစွမ်းပြနေတဲ့ ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ ပရိသတ်တွေကလည်း ဖာနန်ဒက်စ်အပေါ် အများကြီးေ မျှာ်လင့်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဖာနန်ဒက်စ်ဟာ ယူနိုက်တက်အတွက် လက်ရှိအချိန်အထိ (၉)ပွဲကစားပေးထားခဲ့ပြီးတော့ အကောင်းဆုံး စွမ်းဆောင်ရည်တွေကို ပြသထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်တွေမှာဒီလ(၁၇)ရက်နေ့မှာ ပြန်လည်စတင်ဖို့ရှိနေပြီးတော့ ဒီလို ပြန်လည်စတင်မယ့် အခြေအနေတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ဖာနန်ဒက်စ်ကအသင်းဖော်တွေကို အခုလိုပဲသတိပေးစကားပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ ဖာနန်ဒက်စ်က ” ကျွန်တော့်အတွက်တော့ (၉)ပွဲက မလုံလောက်သေးပါဘူး၊ လက်ရှိမှာ အခက်အခဲဆုံး အပိုင်းမှာရှိနေတာကြောင့် ဒါက လုံလောက်အောင်မကောင်းပါဘူး၊ ကျွန်တော်ရဲ့ ပွဲစဉ်တွေကို ဘယ်လိုပြန်စတင်မလဲ၊ ဘယ်လိုရွေ့လျားမလဲ၊ ဘယ်လိုပေးပို့မှုတွေပြုလုပ်မလဲ၊ ဘယ်လိုကန်မလဲ၊ ဒါတွေကိူ ပြိုက်ဘက်ကစားသမားတွေက နားလည်စပြုနေပါပြီ၊ အရာရာကခက်ခဲလာပါပြီ၊ …
ပေါလ်စခိုးကို ဘောလုံးသမားဘ၀ကအနားယူချင်စိတ်ပေါက်လုပ်ခဲ့တဲ့ ကစားသမား
[Zawgyi] ပေါလ်စခိုးကို ဘောလုံးသမားဘ၀ကအနားယူချင်စိတ်ပေါက်လုပ်ခဲ့တဲ့ ကစားသမား ယူနို်က်တက်ရဲ့ ဂန္ထ၀င်ကွင်းလယ်ကစားသမားကြီးပေါလ်စခိုးဟာ(၂၀၁၁)ခုနှစ်မှာဘောလုံးသမားဘ၀ကနေအနားယူခဲ့ကြပါတယ်။ ယူနိုက်တက်မှာ (၁၇)နှစ်ကြာရှိခဲ့ပြီး ပွဲပေါင်း(၆၇၆)ပွဲအထိကစားပေးခဲ့တဲ့ သူပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပေါလ်စခိုးတစ်ယောက်ဟာ နောက်တစ်နှစ်မှာတော့ အသင်းရဲ့ အရေးပေါ်လိုအပ်ချက်ကြောင့် မြက်ခင်းစိမ်းတွေဆီပြန်လာခဲ့ပြီး၊ (၁၈)လကြာပြန်ကစားခဲ့ပါတယ်။ အနားယူခဲ့ရတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော ပေါလ်စခိုးက အဲ့ဒီအချိန်တုန်းက စပါးကစားသမားတွေဖြစ်ကြတဲ့ ဂါရက်ဘေးလ်နဲ့မော့ဆာဒမ်ဘီလီတို့က သူ့အနေနဲ့ ဘောလုံးကစားသမားဘ၀ကနေအနားယူသင့်ပြီဆိုတာကိုပြသခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို အခုလိုပဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ပေါလ်စခိုးက ” အိမ်ကွင်းမှာ စပါးနဲ့ ကစားခဲ့ရတဲ့ ပွဲစဉ်ကို မှတ်မိပါသေးတယ်၊ အဲ့ဒီတစ်ကြိမ်တွေ့ဆုံမှုက အဲ့ဒီရာသီတုန်းက (၃)ကြိမ်မြောက်တွေ့ဆုံမှုထင်တယ်၊ ကျွန်တော်တို့ (၃-၂)ဆိုတဲ့ ရလဒ်နဲ့ အနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တ်ာကတော့ဘောလုံးကိုင်ပြီးတော့ ကစားခဲ့ပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်မှတ်မိပါသေးတယ်၊ ဒမ်ဘီလီနဲ့ ဘေးလ်တို့ကတော့ ကျွန်တော်ကို့ တော်တော်ကို လှည့်စားပြီးတော့ကစားခဲ့ကြတာပါ၊ အဲ့ဒီနောက်တော့ …
အင်ဟာလိုအတွက် (၈)လစာ ပေါင်(၁၀.၅)သန်း အငှားကြေးပေးရတာ တကယ်ပဲတန်ရဲ့လား
[Zawgyi] အင်ဟာလိုအတွက် (၈)လစာ ပေါင်(၁၀.၅)သန်း အငှားကြေးပေးရတာ တကယ်ပဲတန်ရဲ့လား ယူနိုက်တက်တို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းတုန်းက ဇန်န၀ါရီအပြောင်းအရွှေ့ကာလတုန်းက အငှားနဲ့ခေါ်ယူထားခဲ့တဲ့ တိုက်စစ်မှူးအင်ဟာလိုကို အငှားစာချုပ်သက်တမ်းတိုးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အင်ဟာလိုဟာယူနိုက်တက်မှာ (၂၀၂၁)ခုနှစ်ဇန်န၀ါရီလအထိရှိနေတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ယူနိုက်တက်တို့ဟာ နောက်ထပ်(၈)လအငှားစာချုပ်အတွက် ရှန်ဟိုင်းရှင်ဟွာအသင်းထဲကို ပေါင်(၁၀.၅)သန်းအထိပေးချေခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုပေးချေခဲ့ရတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ အင်ဟာလိုအတွက် (၈)လစာပေါင်(၁၀.၅)သန်းပေးခဲ့ရတာကတန်ရဲ့လားဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေကထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ အင်ဟာလိုဟာယူနိုက်တက်မှာရှိနေခဲ့တဲ့ အချိန်အတွင်း (၈)ပွဲကစားထားခဲ့ပြီး၊ ယူနိုက်တက်အတွက် (၄)ဂိုးအထိသွင်းယူပေးထားနိုင်ခဲ့တဲ့တိုက်စစ်မှူးတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်မှာကိုရိုနာကြောင့် အသင်းရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေတွေ ကျဆင်းနေတဲ့ အချိန်မှာ ယူနိုက်တက်တို့အတွက် အင်ဟာလို လိုတိုက်စစ်မှူးမျိူးကို အသင်းမှာဆက်ထိန်းထားနိုင်တာဟာတော်တော်လေးမှန်ကန်တဲ့လုပ်ရပ်လို့ပြောလို့ရသလို၊ အသင်းရဲ့ အပြောင်းအရွှေ့စရိတ်ကိုလည်း အများကြီးချွေတာရာရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။ နွေရာသီအပြောင်းအရွှေ့ဈေးကွက်ထဲမှာ တိုက်စစ်မှူးတစ်ဦးခေါ်ယူမယ်ဆိုရင် ယူနိုက်တက်တို့ အနေနဲ့ပေါင်သန်း(၅၀)နဲ့ အထက်ကိုသာသုံးရဖိှု့ရှိနေပြီးတော့ညာတောင်ပံလိုမခေါ်မဖြစ်ခေါ်ရမယ့် နေရာအတွက်အသုံးစရိတ်တွေလည်းရှိနေတာကြောင့် အသုံးစရိတ်ပိုထွက်လာဖို့ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ အင်ဟာလိုကိုဆက်ထိန်းထားနိုင်ခဲ့တာကြောင့်လည်း အသင်းရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းမှာ အင်ဟာလို၊ရက်ဖို့ဒ်။ …
‘မိဘကိုချစ်ရင် မရှက်ပါနဲ့’ (အချိန် ၂ မိနစ်ပေးဖတ်ကြည့်ပေးပါ)
[Zawgyi] ‘မိဘကိုချစ်ရင် မရှက်ပါနဲ့’ (အချိန် ၂ မိနစ်ပေးဖတ်ကြည့်ပေးပါ) အလယ်တန်း အထက်တန်း ကျောင်းသူဘဝတုန်းက ကျောင်းတက်ရင် အတန်းဖော်သူငယ်ချင်းတွေက မေးကြတယ်” နင့်အဖေ ဘာလုပ်လဲ နင့်အမေ ဘာလုပ်လဲ ” လို့ မေးရင် ကျွန်မအရမ်းအားငယ်ရတယ် ဝမ်းနည်းမိတယ်။” ငါရဲ့ဖေဖေက စက်ချုပ်တယ် ငါ့ရဲ့မေမေက ထမင်းချက်တယ် ” ဆိုတဲ့ အဖြေကို မရဲမဝဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို ဖြေခဲ့ရတယ်။( ” ငါ့ဖေဖေက အင်ဂျင်နီယာ ငါ့မေမေက ဒေါက်တာ ” ဆိုပြီး တချို့သူငယ်ချင်းတွေလို ဂုဏ်ယူဝဲ့ကြွားစွာ ဖြေချင်မိတယ် ) ဒါပေမယ့် … ကျွန်မ အဖေက စက်ချုပ်တယ် အမေက ထမင်းချက်တယ်။ တစ်န့တော့ …
အကယ်ဒမီ “ဒွေး” ပြောတဲ့ “ပညာရှင်ဆိုတာ”
[Zawgyi] အကယ်ဒမီ “ဒွေး” ပြောတဲ့ “ပညာရှင်ဆိုတာ” ၁၆-၆-၂၀၁၉၊ ည(၁၁း၀၄)နာရီ…. အကယ်ဒမီ “ဒွေး” ပြောတဲ့ “ပညာရှင်ဆိုတာ”၊ ကျွန်တော် ၂၀၀၉ ခုနှစ် မေလမှာ မိုးလေဝသဌာနမှ အငြိမ်းစားယူတော့ ဂျာနယ်လစ်တွေက ကျွန်တော်ပါတဲ့ သတင်တွေ ရေးတဲ့အခါ “မိုးလေဝသပညာရှင်” လို့ သုံးလာကြပါတယ်။ကျွန်တော် တားပါသေးတယ်။ “မိုးလေဝသသုတေသီ” ဆိုရင် တော်လောက်ပါပြီလို့။ ဒါပေမယ့် မရပါဘူးဗျာ။ အခုတော့လည်း အားလုံး က သုံးနေကြပါပြီ။တကယ်တော့ ပညာရှင်လို့ အခေါ်ခံရတာ ဂုဏ်ယူစရာပါ။ဒါပေမယ့် ရိုးရိုးသားသားပြောရရင် ကျွန်တော့နေနဲ့ ဒီ…… ဂုဏ်ပုဒ်ဟာ မြင့်လွန်းနေတယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ နောက်ပြီး ဂိုဏ်းသင့်မှာလည်း စိုးရိမ်မိပါတယ်။ အဆိုးဆုံးက တော့ ကွယ်လွန် သွားရှာပြီဖြစ်တဲ့ …
ပြည်သူတွေအတွက် အစားထိုး သင်္ကြန်ပွဲတော်ကို ဇူလိုင် (၄)ရက်၌ စတင်ကျင်းပရန် လျာထား
[Zawgyi] ပြည်သူတွေအတွက် အစားထိုး သင်္ကြန်ပွဲတော်ကို ဇူလိုင် (၄)ရက်၌ စတင်ကျင်းပရန် လျာထား သင်္ကြန်ပွဲတော်ကို အစားထိုးကျင်းပရန် လျာထားသည့်အစီအစဉ်အရ ဇူလိုင်လ (၄)ရက်နေ့မှ (၆)ရက်နေ့အထိ ကျင်းပမည်ဖြစ်ကာ သင်္ကြန်နှင့်တွဲသည့် အစားထိုးပိတ်ရက်အဖြစ် ဇူလိုင် (၇)ရက်နေ့မှ (၉)ရက်အထိ ပေးရန်စီစဉ်ထားရာ စုစုပေါင်း ပိတ်ရက် (၆)ရက် ရရှိကြမည်ဖြစ်သည်။ COVID 19 ကြောင့် ဧပြီလက မကျင်းပခဲ့ရသည့် သင်္ကြန်ကာလကို မိုးရာသီဖြစ်သည့် ဇူလိုင်လတွင် အစားထိုးပြန်လည်ကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီး လူစုလူဝေးမဖြစ်စေရန် တင်းကြပ်စွာ စီမံဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု သိရသည်။“ကျွန်တော်တို့ အများကြီးတော့ သတိထားစဉ်းစားဖို့လိုတယ်”ဟု ထိုင်းယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီး Ittipol Khunpluem က ပြောသည်။ အဆိုပါ လျာထားအစီအစဉ်ကို ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ …
အိုမင်းနေပြီဖြစ်တဲ့ မိဘဘိုးဘွားတွေကို ဘယ်တော့မှမပြောသင့်တဲ့ စကား(၅)ခွန်း
အိုမင်းနေပြီဖြစ်တဲ့ မိဘဘိုးဘွားတွေကို ဘယ်တော့မှမပြောသင့်တဲ့ စကား(၅)ခွန်း လူတွေဟာ ဘယ်လောက်ပဲ တော်နေနေ သဘာဝတရားကြီးရဲ့ ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်တွေကို လက်မခံချင်လို့ မရပါဘူး ။ ဒီလိုအရာတွေထဲမှာ ‘ဇရာ’ ဟာလည်း တစ်ခု အပါအဝင်ဖြစ်တယ် ။ အသက် တဖြည်းဖြည်း ကြီးလာတဲ့အခါ မိဘဘိုးဘွားတွေမှာ အားနည်းချက်တွေ များလာမယ် ၊ စွမ်းဆောင် နိုင်စွမ်းတွေကျလာမယ် ။ ဒီအခါမှာ သားသမီးတွေအနေနဲ့ အိုမင်းနေပြီဖြစ်တဲ့ မိဘဘိုးဘွားတွေကို ဘယ်တော့မှ မပြောသင့်တဲ့ စကား (၅) ခွန်း ရှိပါတယ် ။ (၁) ဒါလေးတောင် မသိဘူးလား သားသမီးတွေအနေနဲ့ တစ်ခါတလေ အကြောင်းအရာ တစ်ခုခုကို ပြောနေတာဖြစ်ဖြစ် ၊ လူတိုင်းနီးပါး နားလည်နေတဲ့ …
မနာလိုသူတွေရဲ့ အက်ဆစ်နဲ့ တိုက်ခိုက်တာ ကိုခံလိုက်ရတဲ့ ဆရာဝန်မလေးရဲ့အဖြစ်
[Zawgyi] မနာလိုသူတွေရဲ့ အက်ဆစ်နဲ့ တိုက်ခိုက်တာ ကိုခံလိုက်ရတဲ့ ဆရာဝန်မလေးရဲ့အဖြစ် သူ့နေရာမှာ တခြားလူသာ ဆိုရင် ဆယ်ခါပြန်လောက် ကိုယ့်ကိုကိုယ် သတ်သေမိမှာ။ ဒါမှမဟုတ် ရင်လည်း အခုလို ကလေးအထူးကု ဆရာဝန်ဖြစ်ဖို့ မျက်မမြင်. ရုပ်ပျက် ဆင်းပျက်ဖြစ်ပြီး လူတော မတိုးဝံ့တော့အောင် လုပ်ခဲ့သူကို နာနာကျည်းကျည်းနဲ့ လက်စား ချေကြမယ် ထင်တယ်။ကြောက်စရာ မစ္ဆရိယစိတ် လူတွေတစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး မနာလိုစိတ်တွေ မလိုမုန်းထား စိတ်တွေနဲ့ တိုက်ခိုက် လာကြတယ်။တစ်ချို့က ဘဝပျက်အောင် ရည်ရွယ်ပြီး တိုက်ခိုက်ကြတယ်။ တစ်ချို့က နာမည်ပျက်အောင် ရည်ရွယ်ပြီးတိုက်ခိုက် ကြတယ်။ တစ်ချို့က မိသားစု ပျက်စီးပြိုကွဲ အောင်တိုက်ခိုက် ကြတယ်။ တစ်ချို့က ပါးစပ်အရသာခံပြီး သူတပါးကို …
This Month : 13574
This Year : 254503
Total Users : 549636
Total views : 2453871